1 week ago फेसबुकमा न्युज, स्टाटस र फोटो कसरी ब्याक डेटमा पोस्ट गर्ने ?
1 week ago माइक्रोसफ्टको अफिस २०२१ का फिचर्स यस्ता छन्
1 week ago २०२३ को डिभी खुल्यो, घरबाटै यसरी भर्नुस्
1 week ago नेपालको पहिलो साइबर सेक्युरिटी जर्नल (Cyber Security Journal) आउदै, प्रकाशन संयोजनको जिम्मेबारी डा. राजिब सुब्बा लाई
1 week ago हिमालयन- इन्भेष्टमेन्टबीचको मर्जरमा किन ढिलाई ?
2 weeks ago नेपाल टेलिकमले ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सित्तैमा सिम कार्ड दिने
2 weeks ago २०२३ को डिभी लोटरी खुल्यो : भर्न छुट्ला है ! यसपटक डिभी भर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ
2 weeks ago How can possible Technology through buildaprosperous Nepal – Prof. Dr. Ramhari Subedi
2 weeks ago के ४ र १२ करोडको सीमा नहटाउँदा सेयर बजार वियरिसतर्फ गएको हो ?
2 weeks ago सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव
Feb Tue 2020 08:40:22
सामसुङको एस २० प्लसको मूल्य १० हजार घट्यो
क्रिसमस अफरः ७ हजार ८ सय रुपैयाँको किस्तामा आईफोन १२
७००० एमएएच ब्याट्री भएको ‘सामसङ एम ५१’ को यस्ता फिचर्स
नेपालको पहिलो साइबर सेक्युरिटी जर्नल (Cyber Security Journal) आउदै, प्रकाशन संयोजनको जिम्मेबारी डा. राजिब सुब्बा लाई
11 months ago 5553 views
1 year ago 5309 views
1 year ago 4565 views
1 year ago 3923 views
1 year ago 3832 views